Brain as SQL Fuzzer – Legion of LOL
May 24, 2017 Thin Ba Shane Uncategorized 0
ခေါင်းစဉ်ကိုတော့လှအောင်ပေးထားတပေါ့ 😀 တကယ်တော့ Brain ဆိုတာ fuzzer မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်ထားဖို့လိုတာလေးတွေရေးပေးရင် Automation ထပ်မြန်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Fuzzer တွေက လူသက်သာတယ်ဆိုပေမဲ့ ISP တွေရဲ့ Data charges နဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင် သိပ်တော့မစားသာလှဘူး။ တကယ်လို့သာ Brain နဲ့ fuzz လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန် နဲ့ ပိုက်ဆံကို နည်းနည်းတော့ သက်သာစေမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
Error တွေကနေအဖြေရှာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဖတ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Error အကြောင်းလေးနည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်ကြတာပေါ့။
String Based Errors
String variables တွေရှိပါတယ်။ ( Reference )
ဒါတွေက မှားထည့်ရင် Error တက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
ဒါက ပုံမှန် double quoted string ပါ။ double quote ၂ ခုကြားမှာရှိနေတဲ့ string ပေါ့။ ဘာပြသနာမှမရှိပါဘူး။ ရေးထားတာမှန်နေတာကိုး။ ဒီလိုဆို
” ” ” ၃ ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ။ Error တက်ပါတယ်။
Parse error: syntax error, unexpected '"' in C:\_xampp\_htdocs\_error.php on line 2
ဒီလို Error ပြန်တက်တက်တာလား ? Double Quote သုံးခုဖြစ်သွားလို့ Error တက်တာပါ။ တကယ်လို့ single quote ထည့်ခဲ့ရင် Error တက်ပါ့မလား။
မတက်ပါဘူး Output က aaa’ ဆိုပြီးပြန်ပေါ်နေမယ်။ syntax ကမှန်နေတာကိုး။ Single quote ထည့်လိုက်လို့ Error မတက်ဘူးဆို သေချာတယ်။ Single quoted string မဟုတ်ဘူး။ ဒီနေရာမှာ escape character ဖြစ်တဲ့ Back slash ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာ quote ပဲဖြစ်ဖြစ် escape ဖြစ်သွားတဲ့ Error တက်မှာပဲ။
ဒါက ဘာသုံးထားတယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူး။ Input က အထဲကိုဝင်သွားလားမ၀င်သွားဘူးလားဆိုတာပဲသိနိုင်မယ်။ Initial test မှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ ခုဆို Error အကြောင်းကိုနားလည်သွားပြီ။
Strings Knowledge for testing
အထဲမှာဘာသုံးထားလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းဖို့ဆိုတာ ဘာတွေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကို တို့တွေသိထားမှရမယ်။ မဟုတ်ရင် တို့တွေ Escape လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စမ်းကြည့်ရအောင် ဒီလိုဆို DVWA ထဲက SQL Injection ဆိုပါစို့။ Single quote ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အောက်က Error တက်မယ်။
Error တက်ပြီဆိုတည်းက guess လုပ်လို့ရတယ်။
=' $input ' ;
single quote နဲ့ရေးထားလို့ single quote ထည့်လိုက်တဲ့အချိန် Error တက်တာပေါ့။
double quote ထည့်ကြည့်လေ ဘာ error မှမတက်ဘူး။ Error မှာလဲပါလာတယ်။ ” ‘ ” ဒီနားမှာ မှားနေပါတယ်တဲ့။
SQL query ကို Guess လုပ်ကြည့်ရအောင်။ ပုံမှန်အတိုင်းထည့်လိုက်မယ်။
ဒါဆို Query က ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ?
SELECT id,firstname,surname from <table> where id=' $input ' ;
ဒါက Output အပေါ်ကိုကြည့်ပြီး ယေဘူယျ တွေးပစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ * နဲ့ Select လုပ်ထားလားဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် table ထဲမှာ ဒါပဲရှိတယ်လို့ အတပ်မပြောနိုင်ဘူးလေ။ တကယ်လို့သာ * ကိုသုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ input မှာ နောက်က WHERE condition ကို မှန်အောင်ထည့်နိုင်ရင် အကုန်လုံးထွက်ကြလာမယ်။
SELECT * from <table> where id=' ' or 1=1--+ ' ;
မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ တို့တွေ table ထဲမှာ ဘာတွေညာတွေရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားရတော့မယ်။ union တွေဘာတွေနဲ့ဆက်လုပ်တော့ တခြား ဘယ် Column တွေရှိသေးတယ်ဆိုတာထိ။ ဒီမှာတော့ အဲဒါတွေမပြောဘူး ။ Statement မှန်အောင်ပဲလုပ်မယ်။
တကယ်လို့ Single မဟုတ်ပဲ Double quote ဆိုရင်ရော။ Double quote နဲ့လိုက် escape လုပ်ပေးရမှာပေါ့။
SELECT * FROM lolsec WHERE id=1;
Interger နဲ့ဖော်ပြလို့ရတဲ့ column တွေဆိုရင်တော့ Interger type ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိထားရင်ကောင်းတာပေါ့။
'SELECT * FROM lolsec WHERE id="1"';
"SELECT * FROM lolsec WHERE id='1'";
Single Quote & Bracket
"SELECT * FROM lolsec WHERE name=('thinbashane')";
Single quote &2Bracket
"SELECT * FROM lolsec WHERE name=(('thinbashane'))";
Knowing Bracket with error
Parse error: syntax error, unexpected ''); ' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in C:\_xampp\_htdocs\_error.php on line 2
ဒီလောက်ဆို Escape လုပ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်။ တခါတလေ Error မပေါ်ရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။ ဒီအခါကျရင်တော့ တို့တွေက ဘယ်လိုတွေးရေးတတ်တယ်ဆိုတာ သိထားမယ်ဆိုရင် escape လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Lab တွေလိုက်ဖြေကြည့်မယ်ဆို အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။